! सावधान ! कोरोना भाइरस मार्न रक्सी खांदा इरानमा ४४ जनाको मृत्यु – Durbin Nepal News
चैत्र १, २०७६ ४:०३ मा प्रकाशित
संसारभरी नै कोरोना भाइरसको त्रास यति बढेको छ कि केही मानिसहरुले भाइरस भन्दा पनि त्रासका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन । चिकित्सकहरुले मानिसहरुलाई आतंकित नहुन आग्रह गरिरहेको भएपनि त्रासका कारण कैयन हल्लाको पछि लागेर ज्यान गएका घटनाहरु धेरै बढ्न थालेका छन ।
त्यस्तै एक घटना इरानमा भएको छ । इरानमा रक्सी सेवनले कोरोना भाइरस मर्छ भन्ने हल्लाको पछिलाग्दा कैयनको ज्यान गइसकेको छ । केही समाचारहरुमा जनाइएअनुसार ४४ जना इरानीहरुको सोही कारण ज्यान गएको छ । सोही कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्नेछ । इरानको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रको खुजेस्थान प्रान्तमामात्रै कोरोना भाइरस मर्छ भन्दै विषालु रक्सी सेवन गर्दा ३६ जनाको मृत्यु भएको हो । सो स्थानमा अन्य दुई सय जना अस्पताल भर्ना भएको जनाइएको छ । इथानल र मेथानल मिसावट गरिएको घरेलु मदिरा सेवन गर्दा उनीहरुको मृत्यु भएको हो । इरानको राजधानी तेहरान र अल्बोरज भन्ने स्थानमा पनि विषादी मदिरा सेवनका कारण मृत्यु भएको छ । इरान कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित मध्यपूर्वी देश हो । इरानमा १० हजार भन्दा धेरै मानिसहरु कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन भने झण्डै पांच सय जनाकोे ज्यान गइसकेको छ ।
कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता नलागेकोले मानिसहरु आतंकित बनेका हुन । तर चिकित्सकहरुका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने सबैको ज्यानै जाने होइन । कमजोर रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता भएकाहरुलाई भाइरसले असर पार्न सक्नेहुंदा आत्मबल बलियो बनायो भने कोरोना भाइरसको असर कम हुने चिकित्सकहरु बताउछन । अर्कोतर्फ कोरोना भाइरस मर्छ भनेर हल्लाको पछि लाग्दै जो पायो त्यही सेवन नगर्नपनि आग्रह गरिएको छ ।